Yini okufanele ngiyilungise kuqala ngaphambili noma ngemuva kwe-derailleur? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Lungisa i-derailleur engaphambili - unganquma kanjani
Lungisa i-derailleur engaphambili - unganquma kanjani
Yini okufanele ngiyilungise kuqala ngaphambili noma ngemuva kwe-derailleur?
Kafushane nje,lungisaingaphambili derailleur kuqala, bese i-ngemuva. Uma ama-derailer adinga nje ukulungisa okuncane (empeleni aphakathiukulungiswakepha 'akulungile impela') bese wenalungisaleyo okusobala ukuthi ayilungile, hlola konkeukulungiswafuthi, bese futhilungisaokudingayoukulungisa.Juni 9. 2016 Nov.
Izinkinga eziningi zokushintsha zangaphambili zingaxazululwa ngama-tweaks ayisisekelo ambalwa. Kulesi sihloko sizokukhombisa ukuthi ungalungisa kanjani kahle futhi ulungise i-derailleur yakho yangaphambili. UCalvin Jones lapha, iPark Tool Company.
Ngaphambi kokuthi singene ngqo, ake sibukeze ukuthi sizokwenzani. Siqala ngokuhlola ukuphakama nokuqondaniswa kwesikhala sangemuva sedreyini. Uma lokhu kubukeka kukuhle, ake sihlole ukulungiselelwa kokuphela kwesikulufu.
Okulandelayo, sizohlola ikhebula lokulungiswa kwenkomba uma lokhu kusebenza kusistimu yakho. Ukubuka konke ukuthi i-derailleur isebenza kanjani, bukela le ndatshana njengoba yenza inqubo yokulungisa ibe enembile nakakhulu futhi elula ukuyilandela. Manje ake siqhubeke nenqubo, siqale ngokubuyekeza okuguqukayo okuyisisekelo kokufakwa ngaphambili kwe-derailleur: ukuphakama kwekheji ngaphezulu kwamaketanga nokujikeleza kwekheji ngokuphathelene nochungechunge.
Ukuphakama kufanele kuhlolwe ngomphetho ongezansi wekheji elingaphandle nje kwendandatho enkulu kakhulu. Lapha sidonsa isigwedlo segiya noma ikhebuli ukuqondanisa lezi zindiza ezimbili. Lokho kuvala igebe eliphakathi kwamazinyo nesibaya sezinyoka kufanele kube ngamamilimitha amabili kuya kwamathathu.
Sebenzisa ukhiye we-Allen njengegeji. Uma ikheji libekwe phezulu kakhulu kunengozi yokuthi iketanga liwe eringini elikhulu kunawo wonke uma linyakaza.Uma ikheji liphansi kakhulu, lingagudla amazinyo endandatho enkulu kunazo zonke noma ngisho naseringini esiseduze kakhulu.
Uma ukuphakama kudinga ukulungiswa, yima futhi uhlole ukujikeleza kwekheji. Ngale ndlela ungashintsha zombili izinkinga ngasikhathi sinye. Ikheji elingaphandle lesiphisi kufanele lihambisane nochungechunge.
Lesi sibonelo ukuguquka okuhle. Kepha lapha ukuphela kwekheji kukude kakhulu futhi nomzimba we-derailleur kufanele ujikiswe kancane ngokwewashi. Lapha kulapho ukuphela kwekheji kukude kakhulu futhi icala lidinga ukuzungeziswa liqonde nse kuwashi.
Abakhiqizi banezinhlelo ezihlukile zokufaka. Izinhlobo zezinhlayiya zezinhlobo zokuqinisa zivumela ukujikeleza nokulungiswa kokuphakama, kepha ngaphambi kokuthi ulungise uhlobo lwensimbi yohlobo locingo, kufanele uzenzele into oyiphawulayo lapho okukhona khona kupayipi. Khulula isikulufa esikhuphukayo bese usisa phezulu noma phansi uma kudingeka.
Futhi qaphela noma yiziphi izinguquko ezingadingeka ekujikelezeni. Qinisa isikulufa esikhuphukayo bese uhlola ikheji. Lolu hlobo lwe-braze lungatholakala kumabhayisikili wokugijima futhi luvumela ukulawula kokubili ukuphakama nokuphakama. kanye namasethingi wokujikeleza Amasistimu wokuphakama okuqondile aqondile avumela ukulungiswa kokuphakama okulinganiselwe Okufana nohlelo oluphakeme lokukhweza okuqondile, uhlelo lwe-E2 alunaso isilungiselelo sokuzungezisa esizimele, kepha luvumela ukulungiswa kokuphakama.
Ngemuva kokuthi umhlangano we-derailleur uhlolwe futhi walungiswa uma kunesidingo, qhubeka nokulungisa izikulufo zomkhawulo. Izikulufu zokukhawulela zivimbela isichazamazwi ukuthi singahambeli kude kakhulu futhi siphume kakhulu. Lapho ulungisa izikulufu zomkhawulo kubalulekile ukubheka ikheji neketanga bese ulungisa ukuze izikhala eziphakathi kwazo zibe zincane ngangokunokwenzeka, kepha kungabikho ukuxabana kwamaketanga nokuhamba okuhle; siqala ngokulungisa i-L-screw.
Hambisa isisi se-derailleur uye eringini elincane kakhulu. Uma izikulufo zomkhawulo zingamakiwe, khetha eyodwa bese uyiphendula ngenkathi ubukele ikheji. Isikulufa se-L sibangela ukunyakaza okuthile kwezinyoni.
Shintshela i-derailleur yangemuva ku-sprocket enkulu. Qaphela ukuthi ibanga phakathi kweketanga nekheji langaphakathi liya ngokuya lincipha. Futhi, siguqula isikulufa esikhawulela u-L ukulungisa leli banga futhi silenze libe lincane ngangokunokwenzeka ngaphandle kokuxubha iketanga.
Okulandelayo sidinga ukuhlola i-shifter wire. Intambo eyeluliwe ingadala umngcele wangaphakathi ongalungile. Le khebuli ingaphansi kwengcindezi, ngakho-ke sizovula isihlanganisi somgqomo ngokujika kwewashi kube yithuba elilodwa noma amabili ukuze siyikhulule.
Ungakhathazeki, sizoyibuyisela lapho kufanele ibe khona ngemuva kwesikhathi. Buka ngenhla bese uvula kancane i-crank. Qinisa isikulufa se-L ukwenza leligebe libe lincane futhi libe lincane kuze kube yilapho iketanga ligudla ekhejini.
Manje khulula i-L-screw ngezinyathelo ezincane kuze kungabikho ukungqubuzana. Kuleli qophelo kufanele sisebenzise umkhawulo wokuhlola we-L.
Lapho usuguqule isihlanganisi somgqomo ngokwewashi, sibuyele emuva siphikisane nsewashi futhi kwise. Shintshela iringi eyodwa ngaphandle bese ubuyela eringini elincane kakhulu. Lapho iketanga libuyela emuva ngokwanele ngokwanele, ukulungiswa kwe-L-screw kuqediwe.
Asikabi nentshisekelo yokuthi ihambela kanjani ngaphandle - ukuthi ibuyela kanjani ngaphakathi ku-sprocket encane kunazo zonke. Uma kukhona ukubambezeleka okubonakalayo kweketanga eliwela phansi eringini elincane kakhulu, khipha isibopho se-L ikota bese uzama futhi. Umqondo lapha ukuthi ube negebe elincane kakhulu phakathi kweketanga nekheji ongasusa ngalo, kepha ushintshe kahle.
Lokhu kungenxa yokuthi igebe elikhulu lenyusa amathuba okuthi leli chungechunge liwe eringini elincane kakhulu ngesikhathi sokushintsha. Isethingi se-H-limit screw sifana nomqondo we-L-limit - kepha lapha sifuna igebe elincane phakathi kwekheji elingaphandle neketanga. Igebe elikhulu lenyusa amathuba okuthi leli chungechunge liwe eringini elikhulu kakhulu ngesikhathi sokushintsha.
Ukusetha umkhawulo we-H kungadida njengoba intwasahlobo emzimbeni we-derailleur ihlala idonsela i-derailleur ngaphakathi ukuze ivivinye isikulufa sethu somkhawulo wangaphandle. Ukufaka ingcindezi engaphandle njalo, sidinga ukusebenzisa izishifu zethu zokushintsha. Isinyathelo sokuqala ukushenxisa iketango liye esitsheni sangemuva esincane kunazo zonke.
Qaphela ukuthi lokhu kuzophinde kuhambise uchungechunge lubheke phambili ngaphambili. Ukushintshelwa ochungechungeni lwangaphambili olukhulu kakhulu, iketanga alinakugudlulwa nakancane, ikhebula lihamba kancane kakhulu. Guqula isihlanganisi somgqomo siphikisana nokuhamba kwewashi bese uzama futhi.
Uma ungenakho ukujika esikhaleni somgqomo, yicindezele ngokucophelela. Isonte ungene ngaphakathi uphinde ubuyisele ukujika okumbalwa. Shift i-shifter ubuyele esimeni esingaphakathi bese unyathela amaphedali ukuze ulethe iketanga ngaphansi kweringi elincane kakhulu elihambisana nendawo yokuma kweshift kanye nendawo ye-derailleur Kufanele unciphise ikhebula kusikulufu sokuqinisa.
Uma kungakenzeki ukushintshwa, isikulufa se-H-limit singase siqine kakhulu. Zama ukuguqula isikulufa amajika ambalwa ujikeleze ngasikhathi. Manje njengoba sesisendandeni enkulu kunazo zonke, khipha isikulufa se-H-umkhawulo amahlandla ambalwa.
Sizokwenza umkhawulo we-H ukhululeke kakhulu ngenhloso, bese sizowubuyisela emuva kuze kube ulungile. Manje faka ingcindezi eyengeziwe ku-lever yegiya. Kufanele kube negebe lapha elisitshela ukuthi isikulufa sethu somkhawulo empeleni sikhululekile kakhulu.
Sizokuqinisa isikulufa se-H-Limiter ukunciphisa leli gebe, ungasiqinisi isikhathi esingaphezu kwekota. Faka ingcindezi ukuhlola igebe. Phinda inqubo uze ufinyelele igebe elincane - cishe imilimitha elilodwa.
Manje vula i-crank ukuze uqiniseke ukuthi lolu chungechunge aluzihlikihli - njengamanye amacici axegayo - qhubeka ubambe ingcindezi njalo kushifter. Hlola isilungiselelo se-H-Limit ngokushintshela eringini elilandelayo elilandelayo bese ubuyela emuva. Ngenkathi ushintsha, cindezela ngokuphelele isigwedlo se-gearshi ukulingisa ukusethwa kahle kwekhebula.
Ukucindezela isigwedlo kuhlukanisa isethingi yekhebula kulungiselelwa umkhawulo. Uma ishifti sibonakala sihamba kancane noma i-derailleur ingeke isuke, noma ngabe ingcindezi igcwele ku-lever umkhawulo uqine kakhulu, ungakhululi ngaphezu kwekota bese uzama futhi. Uma iketanga lingaphezu kochungechunge olukhulu kunawo wonke noma selizophela, umkhawulo we-H uthambile kakhulu.
Ungaqinisi ngaphezu kwekota bese uzama futhi. Umqondo wokushintshwa kwenkomba ukuthola ikheji esimweni esifanele ngokuhlobene namaketanga. Lokhu kwenziwa ngokulungisa isihleli somgqomo.
Ezinye izinhlelo ze-lever zingaba nezikhundla ezimbili noma ezintathu. Abanye banokuchofoza okuningi. Inqubo iyefana.
Kuzinhlelo ezinezinkomba zokushintsha izinkomba kepha ngaphandle kwesilungisi se-cylinder, ukulungiselelwa kwenziwa ngokunciphisa nokwelula ikhebula kusikulufu sokuqinisa. Iketanga kufanele libe ku-sprocket yangemuva encane kunazo zonke. Shift uye ochungechungeni olukhulu kakhulu lwangaphambili.
Sithola isethingi yekhebula elifanele ngokwethula ngamabomu ukunyakaza ehokweni bese silisusa ngokuhlelekile. Ukunyakaza esheji kusitshela ukuthi ukuxhumana kuyisikulufa se-H- Limit esingathintwanga futhi lapho ukunyakaza sekuphelile siyazi ukuthi ukulungiswa kwekhebula kulungile. Cindezela isigwedlo sokushintsha.
Uma ikheji lingahambi, vula isihlanganisi somgqomo ngokwewashi ukunweba ikhebula ngempumelelo. I-lever iphinde icindezele bese iphinda kuze kube nokunyakaza okuncane. Uma ukwazi ukunyakaza, vula isihlanganisi somgqomo isigamu sejika ujikele esiphambanweni bese uvivinya ngokucindezela isigwedlo segiya.
Phinda lokhu kuze kube yilapho ikheji lizoyeka ukuya ngaphandle uma ucindezela isigwedlo sokushintsha. Ukuhlelwa kwenkomba manje sekuqediwe; qaphela ukuthi kukhona ukuhlanganiswa kwamagiya ngaphambili nangasemuva abakhiqizi abangahloselwe ukukusebenzisa. Isibonelo, kuleli bhayisikili, enhlanganisweni enkulu iya enkulu, iketanga lihlikihla ikheji futhi lenze ushintsho lokuliyeka liholele ekuxabaneni namanye amagiya awusizo ngokwengeziwe.
Kuleli bhayisikili, inhlanganisela encane kuya kokuncane ibangela ukuhlehla kweketango uma kuqhathaniswa nochungechunge lwangaphakathi. Asikho isilungiselelo esivimbela lokhu. Kulezi zimo, sebenzisa ezinye izinhlanganisela zamagiya ezinesilinganiso segiya esifanayo.
Kunezinhlobo ezithile zamagiya egiya asebenzisa umsebenzi wokunquma. Lezi izilungiselelo zesigamu ezihambisa ikheji kancane. Uma iketanga lingena lingena noma liphuma lapho kususwa i-sprocket yangemuva, iketanga lizohamba liye ngaphambili ngakwesokunxele nakwesokudla kwekheji futhi lingagcina likhuhla; I-Trim ikuvumela ukuthi uhambise ikheji inani elincane ulibhekisele kulokhu kuhamba kochungechunge .Uma i-shifter inomsebenzi wokunquma, lokhu kwakhiwe ngokwakhiwa.
Akukho ukulungiswa okuhlukile okudingekayo. Lezi izilungiselelo eziyisisekelo zama-derailleurs. Ibhayisikili kusamele lihlolwe.
Khumbula ukuthi imithwalo ngesikhathi sokusebenzisa inkulu kunaleyo, esiyibonayo lapho ibhayisikili lisesitendeni somsebenzi; ngokwesibonelo, uma unyathela ngamandla, ifreyimu izogobeka kancane ngaphansi kubakaki ongezansi. Lokhu kungadala ukuthi izintambo ezihamba ngamaketanga zihambe kancane phakathi kwamakheji e-derailleur nasochungechungeni olukhulu kakhulu lapho kugitshelwa imbangela yokushayisana, lokhu kuyingxenye yemikhawulo yengxenye uma wenza inqubo kule ndatshana isebenza futhi usenezinkinga, bukela i-athikili yethu ku-Advanced Ukuxazulula inkinga, futhi ekugcineni ubuke le ndatshana ukuze ubukeze wonke ama-derailleurs ethu namagiya angemuva. Yilokho kuphela kwesethingi yokushintsha.
Uma lokho kukusizile, kunikeze isithupha bese wabelana ngakho nabangani bakho. Kuyasisiza impela ukuletha okuqukethwe kwakho, futhi kungigcina ngivalelwe lapha estudiyo. Yilokho - sobonana esihlokweni sethu esilandelayo sosizo lokulungisa.
Kungani isisiyi sami sangaphambili singashintshi?
OkuvamileIzinkinga zangaphambili ze-Derailleur.Ama-derailleurs angaphambilikungadala ukuvilapha noma kunganembiukuguqukangoba (A)isiphambekoumzimba unjalohhayiibekwe kahle, (B)isiphambekoIzikulufu zomkhawulo zikhonahhayikulungiswe kahle, (C)iumshini ungcolile noma (D)iikhebula lonakele noma lishubile ngokungafanele.
Izinkinga zeShift kwesinye isikhathi kungaba nzima ukuzithola. Le ndatshana ihlanganisa ezinye zezimbangela zokungasebenzi kahle kwe-derailleur nokuthi ungazilungisa kanjani. UCalvin Jones lapha, iPark Tool Company.
Izixazululo ezivame kakhulu ezinkingeni zokushintsha yizisekelo: ukuqondanisa okulungile, ukulungisa izikulufu zomkhawulo, nokulungisa ukusethwa kwenkomba. Ukuhamba kwalezi zinqubo, bheka le ndatshana, kepha uma usuvele uhlole lezi zilungiselelo futhi izinto zisabonakala zingalungile, nazi ezinye izingqinamba okufanele uziqaphele. Umthombo ovamile wezinkinga ezishintshayo zombili izisuli zangaphambili nezisusa isistimu yakho yezintambo.
Uhlelo lwentambo izindlu nezintambo zangaphakathi zihlangene. Ukungcola kanye ne-grit kungasebenza kungene ngaphakathi. Lokhu kudala ukungqubuzana phakathi kwesistimu, ebambezela ukuguquka kuzo zombili izinkomba.
Kumabhayisikili amaningi, ungabhekisisa ikhebula ngokufaka ibhayisikili egiyeni eliphansi kakhulu. Ngemuva kwalokho, ngaphandle kokubamba inyawo, susa i-derailleur ukukhulula ikhebula. Susa ikhava ezitobhini.
Yizwa intambo uzwe ukuthi isilayidi secala. Noma, ungasula intambo bese usebenzisa i-lubricant. Buyisela icala emuva ubone ukuthi kuyasiza yini.
Kepha uma lokho iBike inegobolondo eligcwele elingenazo izitobhi lokhu ngeke kusebenze; kufanele ukhulule isikulufa socingo ukuze uzizwe ukuthi ikhebula lisebenza kanjani. Uma izwa injoloba, faka ikhebuli entsha necala. Futhi hlola ingaphandle lecala, ikakhulukazi emaphethelweni.
Ukulimala kohlelo akusizi. isifunda sethu. Ukushintsha ikesi nekhebula kuyindlela engcono kakhulu.
Inkinga elandelayo ikheji eligobile. Leli cage lingagoba uma kwenzeka kuba nomthelela. Ukugoba ikheji futhi kunzima, bavame ukugoba okuningi ngoba kunzima kakhulu ukuhlukanisa umgoqo wokuqala lapho uzama ukulungisa.
Ukushintshaniswa kuyindlela engcono kakhulu. Amaketanga azoguga ngokuhamba kwesikhathi futhi iketanga ngeke likhiye kahle eringini eligugile. Izinyo elixhunywe ngamaketanga nalo lingagoba ngenxa yomthelela.
Izinyo lenza imisindo futhi kwesinye isikhathi iketanga liyabanjwa. Lapho ukufaka esikhundleni kuyindlela, kuvame ukwenzeka ukugoba izinyo kabusha. Uma izinyo eligobile liphuka lapho uligoba, usengazama ukufaka uchungechunge.
uyajuluka umfutho wegazi ophansi
Ngisho nangaphandle kwalelo zinyo elilodwa, iringi kungenzeka isebenze kahle. Enye inkinga ukuthi ukuhlanganiswa ngamaketanga kuzoxega ngokweqile lapho kuvulwa. Lokhu kungaholela ezinqubweni zokushintsha ezingahambelani futhi kwenze kube nzima ukulungisa izikulufo zomkhawulo nezilungiselelo zenkomba.
Okokuqala hlola ukuthi zonke izikulufo ezihlanganayo ziqiniswe kahle futhi uqaphele ukuthi izikulufo ezixhunyanisiwe zidinga i-torque engaphansi kakhulu kune-crank screw. Uma i-chainring igobile, ukufaka esikhundleni sayo kuyindlela engcono kakhulu, lokho kungukuxazulula inkinga ngaphambili kwe-derailleur. Uma usenenkinga yokushintshwa, bheka indatshana yethu yokuxazulula inkinga ku-Parktool.com noma ulethe ibhayisikili lakho kumakhenikha onolwazi.
Ekugcineni, qiniseka ukuthi uhlola umhlahlandlela wethuluzi le-Park Tool Derailleur ukuthola ukubuka konke kwawo wonke amagiya ethu nokuqukethwe okuguqukayo. Siyabonga ngokubuka le ndatshana yosizo yokulungisa Ithuluzi lepaki. Sihlala sengeza ama-athikili nezindatshana lapha ku-YouTube nakuwebhusayithi yethu eParkTool.com.
Sicela unikeze le ndatshana isithupha uma ikusizile. Futhi-ke, bhalisela okuqukethwe kwethuluzi lepaki lakamuva.
Kwenzekani uma i-derailleur yangaphambili iphezulu kakhulu?
Iningiizisuli zangaphambiliingalungiswa ukuphakama nokujikeleza.Umaisibaya simisiwekuphakeme kakhulungaphezulu kweringi enkulu, ingahle ingasebenzi kahle.Kuphezulu kakhuluikheji lingadala ukushintshwa okuhamba kancane, futhi lingavumela uchungechunge ukuthi ludlulele eringini elikhulu kunawo wonke. Lokhu kusiza ukucindezela iketanga ukulinqamula ukuze likwazi ukwenza ishift.UJul 29. 2017 Nov.
Iyiphi indlela engcono yokulungisa i-derailleur yakho yangaphambili?
Ukulungisa umkhawulo wamagiya aphakeme, shenxisela iketango egiyeni lakho eliphakeme kakhulu, okungukuthi, i-sprocket encane kunazo zonke ngemuva, ne-sprocket enkulu kunazo zonke ngaphambili. Umkhawulo wamagiya aphakeme uvimbela iketanga ekushintsheni lidlule ikhebula lesondo elikhulu kunawo wonke futhi lilahle iketanga kuzinsika zakho.
Uyini umkhawulo wamagiye kusiduli sangaphambili?
Kukhona izikulufo ezimbili zomkhawulo wamagiye. Kuma-derailleurs amadala umkhawulo wamagiya aphansi usondele kakhulu kuhlaka, kodwa amanye amamodeli amasha abuyisele emuva ukuma kwe-screw. Ukulungisa umkhawulo wamagiya aphansi, okokuqala qiniseka ukuthi uchungechunge lwakho ludluliselwe kusipotshi esikhulu kunazo zonke ngemuva, nesiphethu esincane kunazo zonke ngaphambili.
Ikuphi i-adjuster yekhebula ku-derailleur?
Uma kune-adjuster yekhebula emzimbeni we-gear lever, noma emzimbeni we-derailleur, isikulule cishe yonke indlela (ngokwewashi). Hlehlisa ibhawodi lokuvikela ikhebula ku-derailleur bese uhambisa ikhebula endleleni.